Elia: So Woate Nka sɛ Aka Wo Nko Ara Ma Ehu Aka Wo Pɛn? | Momfa Nkyerɛkyerɛ Mo Mma
Hwɛ abarimaa kumaa a ɔwɔ mfonini no mu no. Ɛte sɛ nea aka ne nko ara ma ehu aka no, ɛnte saa? Woate nka saa pɛn?— Ɛtɔ mmere bi a, obiara tumi te nka saa. Bible ka Yehowa nnamfo a wɔn nso tee nka sɛ aka wɔn nko ara ma ehu kaa wɔn ho asɛm. Wɔn mu biako ne Elia. Ma yensua ne ho nsɛm.
Ná Yesebel pɛ sɛ okum Elia
Elia tenaa ase wɔ Israel bere tenten ansa na wɔrewo Yesu. Ná Israel hene Ahab nsom Yehowa, nokware Nyankopɔn no. Ná Ahab ne ne yere Yesebel som atoro nyame bi a ne din de Baal. Ɛno nti, Israelfo dodow no ara nso fii ase som Baal. Ná Ɔhemmaa Yesebel tirim yɛ den paa. Ná ɔpɛ sɛ okunkum nkurɔfo a wɔsom Yehowa nyinaa; ná Elia nso ka ho! Wunim nea Elia yɛe?—
Elia guanee! Oguan kɔɔ anhweatam bi a ɛwɔ akyirikyiri so kɔhyɛɛ ɔbodan bi mu. Sɛ wohwɛ a, dɛn nti na ɔyɛɛ saa?— Ampa, na ehu aka no. Nanso, na anka ɛnsɛ sɛ Elia ma ehu ka no. Dɛn ntia? Efisɛ na onim sɛ Yehowa betumi aboa no. Ná Yehowa ama Elia ahu ne tumi pɛn. Bere bi, Elia bɔɔ Yehowa mpae ma ogya fii soro bae. Enti, na Yehowa betumi aboa Elia saa bere yi nso!
Dɛn na Yehowa yɛe de boaa Elia?
Bere a Elia hyɛ ɔbodan no mu no, Yehowa kasa kyerɛɛ no, na Yehowa bisaa no sɛ: ‘Dɛn na woreyɛ wɔ ha?’ Elia kae sɛ: ‘Me nko ara na meda so som wo. Aka me nko ara, na misuro sɛ wobekum me.’ Ná Elia adwene yɛ no sɛ wɔakunkum wɔn a wɔsom Yehowa nyinaa. Nanso, Yehowa ka kyerɛɛ Elia sɛ: ‘Ɛnte saa. Nnipa 7,000 foforo wɔ hɔ a wɔda so som me. Nya akokoduru. Mewɔ adwuma pii ma wo!’ Sɛ wohwɛ a, Elia ani gyee saa asɛm no ho?—
Dɛn na wubetumi asua afi asɛm a ɛtoo Elia no mu?— Ɛnsɛ sɛ wote nka sɛ aka wo nko ara ma ehu ka wo da. Wowɔ nnamfo a wɔdɔ Yehowa na wɔdɔ wo nso. Afei nso, Yehowa wɔ tumi kɛse, na ɔbɛboa wo bere nyinaa! So ɛnyɛ w’anigye sɛ woahu sɛ ɛrenka wo nko ara da?—
1 Ahene 19:3-18
Wɔ Elia bere so no, so na Israelfo dodow no ara som Yehowa? Hena na na Israelfo no som no?
Dɛn nti na Elia guan kɔhyɛɛ ɔbodan bi mu?
Asɛm bɛn na Yehowa ka kyerɛɛ Elia?
Dɛn na yebetumi asua afi asɛm a ɛtoo Elia no mu?